Indlela yokwenza i-lymphatic massage? Yintoni eluncedo ekusikeleni i-lymphatic massage?
Ubuhle bomfazi Uncedo lwezandla
Ukuxiliswa kwe-lymphatic yindlela enomdla kwaye enomdla kakhulu
Iimpawu kunye neendlela zokwenza i-massage ye-lymph drainage footage
Nabani na ubuncinane abaqhelana nolwazi lwabantu oluthile bayazi ukuba i-immune system iyinkimbinkimbi yezinto ezikhuselekileyo, ezibandakanya nezitya ze-lymphatic, nodes kunye ne-lymph eziveliswa ngabo. Kwaye xa kusebenza ngakumbi ukuhamba kwe-lymph, kulunge iimpawu ezikhuselekileyo zomzimba wethu, ukuphulukiswa ngokukhawuleza kwamanxeba kunye neziqhekeza, umbane ogqithiseleyo uphuma emzimbeni. Ukujikeleza kwe-lymph esebenzayo kukhuthazwa ngokuzilolonga rhoqo, kunzima kwaye, ngokuqinisekileyo, ukuxilisa i-lymphatic, ngaphezulu malunga noko kubhaliwe ngezantsi.
Indlela yokwenza i-lymphatic massage?
Nangona inyaniso ebonakalayo, ubugcisa beli massage bunokubonakala bulula kwaye bukhululekile, eqinisweni, yinkqubo enamandla kakhulu echaphazela kuphela izihlunu kunye nesikhumba, kodwa nayo yonke inyama.
Ukwenza le nqubo, umasseur kufuneka afunde kakuhle kwindawo ye-lymph nodes. Imfudu ayifanele ibukhali kwaye icinezele kakhulu, kungenjalo ingozi ingabangelwa endaweni yenzuzo ekulindelekileyo.
Ukumisa umzimba kufuneka kuqhutywe kwigumbi elifudumeleyo, ngaphandle kokusetyenziswa kweeblue oil. Umntu kufuneka akhululeke, ngenxa yale njongo ngaphambi kweseshoni kuyimfuneko ukwenza ukuphefumula kweshumi.
Ngoko, ukuxilisa kufuneka kuqale ngokusebenza ngaphandle kweeyunithi zentloko kunye ne-thoracic kunye ne-axillary units. Ukwenza oku, kuqala uzive ngeqela lokuqala uze ucinezele iminwe, isiguli kufuneka siphefumle ngokucothayo. Senza okufanayo kunye nezinye i-lymph nodes. Ukuba unqwenela, ngaphezu kwenkxininiso, unokwenza lula ukukhawuleza kwee-patches.
Ngoku siye sidlule kwindawo yesisu kunye ne-groin, kuba kule ndawo apho ukuqokelela okukhulu kweempawu zincinci ezincinci kugxininiswe. Kule mfuneko kuyimfuneko ukuba ungasebenzi ngeminwe yakho, kodwa ngesandla sakho sonke. Iimpawu kufuneka zibe kwisigxina esicothayo somntu ogxininisayo, ngelixa ukuphathwa ngokugqithiseleyo kuhambelana nokuphefumula okungapheliyo. Ukuphuhliswa kommandla ngamnye kufuneka kuphele imizuzu eyi-10-15.
I-lymph massage yeenyawo
Inkqubo yokwenza le massage ihluke ngokusuka phezulu, ukususela ngoku umsebenzi we-masseur ukudala ukuphuma kwe-lymph kwimilenze. Le nkqubo inkulu kakhulu kunyango lwe-varicose veins, amanethiwekhi angama-vascular kunye nokuvuvukala kwemilenze. Ndiyabulela ukuphuma kwe-lymph, amathanga alahlekelwa ngumthamo omncinci, ophelele ukulungisa lo mfanekiso. Ubunzima buqala kunye nenxalenye ephezulu ye-hip. Ngomnwe kunye nesiseko sesundu, umculi we-massage kufuneka acacise kancinci isikhumba. Ukunyanzelisa kufuneka kwenziwe ngokukhawuleza nangokucokisekileyo.
Ngeteknolo epheleleyo yokwenza i-lymphatic massage yemilenze kunye nomzimba wonke onokuyibona kule vidiyo. Ukuze ufikelele kwiziphumo ezilungileyo, ikhosi jikelele yale massage kufuneka ibe neeseshoni ezili-15-18. Kwaye kwiiveki zokuqala eziyi-2-3 kufuneka ziyenziwe kanye kwiintsuku ezisixhenxe, ekugqibeleni zandisa inani leeseshoni.
Njengoko sele uqondayo, akufuneki ukuba uthathe imithi ebiza kakhulu ukubuyisela inkqubo ye-lymphatic. Kwanele kuphela ukwenza i-lymph node massage kunye nochwepheshe onamava.
Ukunyamekela kweNtsholongwane yeThumba
Yonyango i-calluses eyomile kwimilenze
Izindlela zokuqwengulwa komfazi wesimanje
Ungalungisa njani imilenze eluhlaza?
Yintoni okufanele ibe yimilenze emihle
Imifanekiso-mncoma ngoMhla kaMama 2017: enhle ngemibhalo ebhaliweyo evela kubantwana
Iimeko: njani ungasebenzisa iphathi ye-bachelorette?
I-Smart make-up, iziphakamiso zokuzenza
Isaladi yenkukhu kunye needrafruit
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo nge-arthrosis
Ubugcisa bezocwangco zomlomo
Amakheke e-lemon kunye nekakhukhunathi
Isaladi neengubo zokugqoka
Intetho kaKendra: Amakhosazana awazalwanga
Ukuqokwa kwamabhinqa kumadoda amancinane kunabo
I-Laurent pie kunye nenkukhu, amakhowe kunye ne-broccoli
I-salmon enonciweyo kwi-grill
Inkqubo yeMichiza yoboya obudayayo